Nomen’ny Fitsarana Rosiana Sazy Roa Taona An-tranomaizina ny Mpisera Media Sosialy Iray Noho Ny Fampitana Votoaty Tao Amin’ny Vkontake · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2016 8:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Български, русский, Español, English
Andrey Bubeyev. Sary avy amin'ny pejy firaisankinan'ny VKontakte solidarity page.
Araka ny filazan'ny mpanao gazety ao amin'ny sampam-baovao Meduza, izay nanatrika ny fitsarana, ny extremisma sy ny fisintahana iampangana an'i Bubeyev dia noho ny singa roa tamin'ny lahatsoratra nozarainy indray (nampitaina) tao amin'ny pejiny VKontakte (tambajotra sosialy Rosiana toy ny Facebook). Ny votoaty iray dia sarina fantsona borosy nify miaraka ny teny hoe “Kendao i Rosia hivoaka tao,” ary ny iray kosa dia famoahana indray ny lahatsoratra nosoratana mpanoratra hafa mitondra ny lohateny hoe “An'i Okraina i Krimea.”
Tamin'ny teniny farany tao amin'ny fitsarana, nanamafy ny voampanga fa ny Lalàmpanorenan'i Rosia dia mamela ny olom-pireneny “hamaky teny sy hanangom-baovao amim-pahalalahana.” Raha nangatahan'ny Meduza mba haneho hevitra mikasika ny didim-pitsarana i Bubeyev, dia voalaza fa namaly hoe: “Tantara fampisehoana hakingana izy izany.”
Nangataka sazy an-tranomaizina telo taona ho an'i Bubeyev ny mpampanoa lalàna tany am-boalohany. Efa mamita sazy hafa tamin'ny fiampangana extremisma ity mpiserasera ity. Tamin'ny Aogositra 2015, nahazo sazy herintaona tao amin'ny toby fanasaziana izy noho ny lahatsoratra hafa tamin'ny haino aman-jery sosialy sy noho ny fihazonana bala tsy ara-dalàna. Tamin'ny volana Martsa 2016, nankatoavin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Rosiana ho gadra politika i Bubeyev.
Ny didim-pitsaran'i Bubeyev no farany tamin'ireo andiana tranga tao Rosia izay voampanga teo ambanin'ny lalàna “miady amin'ny fihetsika (extremista) ny mpiserasera ary omena sazy an-tranomaizina [mg] na asa hanasoavana fiarahamonina [mg] noho ny famoahana na fizarana votoaty ao amin'ny media sosialy.